ရုပ်ချင်းဆင်လို့ လူချင်းမှားခေါ်ခံရတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေနဲ့ ဆုပန်ထွာ
Celebrity News. Uploaded 11 months ago
အပြင်သွားတိုင်း လူချင်းမှားခေါ်ခံရတယ်ဆိုပြီး ခိုင်နှင်းေ၀ က ဆုပန်ထွာနဲ့ ငယ်ငယ်က ဓာတ်ပုံခေးတွေ တင်လာခဲ့ပါတယ်။
ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကတည်းက အနုပညာအလုပ်တွေ လက်တွဲလုပ်ကိုင်လာခဲ့တဲ့ ခိုင်းနှင်းေ၀ နဲ့ ဆုပန်ထွာ ဟာ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေလို့လည်း သိရပါတယ်။ ရုပ်ချင်းကလည်း ခပ်ဆင်ဆင်ဆိုတော့ အပြင်သွားတိုင်း ပရိသတ်တွေက လူချင်းမှားကြတဲ့ အကြောင်းကို ခိုင်းနှင်းဝေက အခုလိုပဲပြောထားပါတယ်။
“အပြင်သွားတိုင်း သူ့ကို ခိုင်နှင်းဝေလို့ခေါ်ပြီး ကျွန်မကို ဆုပန်ထွာ လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ကျွန်မမှာ ပြသနာ ရှိတိုင်း သူ့ဆီပြောပြဖြစ်တယ်။ သူ့မှာ ပြသနာရှိရင်လည်း ကျွန်မကိုတိုင်ပင်တယ်။ ကျွန်မ လိုအပ်လာရင် ကျွန်မဘေးက အမြဲ ရှိနေပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထဲက တစ်ယောက် Love U ချစ်သူငယ်ချင်းလေး” လို့ ခိုင်နှင်းဝေက ငယ်ငယ်က ပုံလေးတွေတင်ပြီးပြောထားပါတယ်။
ခိုင်နှင်းေ၀ တင်ထားတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်က ဓာတ်ပုံလေး နဲ့ အခု သူတို့ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးဟာ ပြောင်းလဲမှု မရှိသလောက်ကို နုပျိုဆဲဖြစ်နေတဲ့ မင်းသမီး နှစ်ယောက်ပါ။ သူတို့ နှစ်ဦးလုံးကို ပရိသတ်တွေကလည်း ဒီနေ့အချိန်အထိ ချစ်ခင်အားပေးနေကြဆဲပါ။ ခိုင်နှင်းေ၀ နဲ့ ဆုပန်ထွာ ကို Channel X ပရိသတ်ကြီးက ချစ်တယ်ဆိုရင် Like & Share လေးနဲ့ အားပေးခဲ့ပါဦးနော်။
Star Award ဇာတ်ကား စာရင်းမှ ရန်သူဇာတ်ကားကို နှုတ်ထွက်ကြောင်း ကြေညာလိုက်တဲ့ ရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
အလန်းစား ကကွက်တွေနဲ့ ဒွန့်နေတဲ့ တိုင်ရွန်
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချဉ်းကပ်ပုံလေးတွေ အသေးစိတ်ပြောပြလာတဲ့ မော်ဒယ်/သရုပ်ဆောင် ထူးအောင်
အထာကျကျ ဟင်းချက်ပြလိုက်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း
ငပလီမှာ ရေသူခြောက် ရှိကြောင်း သက်သေပြလိုက်တဲ့ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း)
အဖနိုင်ငံတော် ရခိုင်ပြည်ရဲ့ အလှတရားတြေကို ဖေါ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့ ရခိုင်မင်းသားချောလေး နေတိုး
ပရိသတ်တွေအသည်းကို ခြွေလိုက်တဲ့ မနော နဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
နတ်တွေပေးတဲ့ မအိုဆေးတွေ စားနေသလားလို့ ထင်မှတ်ရစေတဲ့ ထိပ်တန်းအမျိူးသမီးအနုပညာရှင်သုံးယောက်
ပရိသတ်တွေပေးတဲ့ အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်ထု ကို လက်ခံရရှိခဲ့တယ့် မြိုင်
မင်းသွေးကို သတိရစေမယ့် ဗီဒီယိုလေး တင်လိုက်တဲ့ ထွန်းထွန်း
ဘဝတစ်ပါးသို့ကူးပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ ပြည်သူချစ် ဟာသ လူရွင်တော် သရုပ်ဆောင် ကင်းကောင်
ဦးကင်းကောင် ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက် အခန်းလေးမှာ သက်ပျောက်ဆွမ်းကပ်လှူပေးခဲ့ကြတဲ့ ကြာစိ နဲ့အဖွဲ့
အကယ်ဒမီသမိုင်းထဲ ပါသွားခဲ့ပေမဲ့ အကယ်ဒမီရတုန်းက လုံး၀ မပျော်ခဲ့ရတဲ့ မယ်လိုဒီ
၂၀၁၉ မှာ အရင်နဲ့မတူတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ပရိသတ်ကိုချပြလိုက်တဲ့ ရဲလေး
ပုရိသတွေရဲ့အသည်းကို တုန်နေအောင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ ခင်ဝင့်ဝါရဲ့ ဗီဒီယို
အဝေးပြေးကားစီးပြီး မန္တလေးရောက်နေတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
ပင်လယ်ကြီးနဲ့ အလှတွေပြိုင်နေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း
ပရိသတ်တွေအပြောများနေတဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ ဖက်ရှင်
အသက်ရှူဖို့တောင်မေ့သွားရတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ အကြမ်းစားကြော်ငြာ
ချစ်သူများနေ့ကို အချစ်တွေတိုးစေမယ့် ကော်ဘရာ နဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း
တစ်ခါမှမကဖူးတဲ့ အမိုက်စားဒွန့်ချက်တွေနဲ့ ဂျင်းကောင်မြင့်မြတ်
ရင်သွေးလေးက ဘာလေးလဲဆိုတာ Surprise လုပ်ခံလိုက်ရတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်
ခြံရှေ့မှာ ရေအေးပေးစက်လေး ချထားပေးပြီး ရေကုသိုလ်ယူထားတဲ့ ခင်လှိုင်
ကြည့်ရှုသူများနေတဲ့ တေးသံရှင် ဝိုင်းလေးရဲ့ “နာရီ”သီချင်းသစ် အမြည်း
စင်အောက်ကနေ အငြိုးတကြီးနဲ့အော်နေတဲ့သူ ဆိုရင် ပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်တာပဲ လို့ပြောလာတဲ့ အိမ့်ချစ်
စိုင်းစိုင်း ကတော့ YES ပါတဲ့
မုန်းစွဲဇာတ်ကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကယ်ဒမီရင်ခုန်သံပြောပြလာတဲ့ မအေးသောင်း
တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေအောင် ခြွေလိုက်တဲ့ လုလုအောင်ရဲ့ ပွဲတက်ဖက်ရှင်
မိုရီဆာကီဝင်း နဲ့ နီနီခင်ဇော်တို့ရဲ့ တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တစ်နေ့ က ဘာဖြစ်မလဲ
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ နောက်ထပ်ကျရှုံးသွားခဲ့ရတဲ့ ဒေါင်းရဲ့ ဗီဒီယို
ခါးနာနေပေမယ့် ပန်းတနော်သူလေးကို သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ဇေရဲထက်
"ည" ဒါရိုက်တာနဲ့ လက်တွဲတော့မယ့် "ဒေါင်း"
အနုပညာမျိူးရိုးမရှိပေမယ့် ငယ်ငယ်ထဲကအနုပညာပိုး ပါလာတဲ့ စုလှိုင်ဝင်း
တော်လောက်ပြီထင်တယ်နဲ့ အားရပါးရအိပ်ပျော်နေတဲ့ ကျော်ကျော်
ကြည့်ရှုသူ သိန်းနဲ့ချီရှိနေတဲ့ ဟိန်းဝေယံ နဲ့ မအေးသောင်း တို့ရဲ့ဗီဒီယို
ဂျင်းကောင်အသံနဲ့ ပရိသတ်တွေ ပါးစပ်မပိတ်နိုင်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့ မြင့်မြတ်၊ ယုန်လေး၊ Kညီ
ကိုကိုတွေ ရူးခါသွားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ နန်းသီရိမောင်
ကြော်ငြာရိုက်ကွင်းရဲ့နောက်ကွယ်က ဇဏ်ခီရဲ့ စွန့်စားမှုက ဘာဖြစ်မလဲ
များများစိတ်ဆိုးလေ များများချစ်လေလို့ ပြောလာတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
၀က်ဝက်ကွဲအောင်ပွင့်ချပြလိုက်တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် ယွန်းရွှေရည်
စာကြည့်တိုက်တွေဖွင့်ကြဖို့ သီချင်းလေးနဲ့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ တေးသံရှင် မနော
ချစ်သူများနေ့မှာ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပြောပြလာတဲ့ နေခြည်ဦး
ချစ်သူများနေ့မှာ ချစ်သူတွေအားတတ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ ကော်ဘရာနဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း
ပျော်နေကြတယ့် ချစ်သူတွေ မင်းလေးတွေ့တယ့်အခါ
Valentine Day မှာထွက်ရှိလာတဲ့ နေရွှေသွေးအောင်ရဲ့ ကြော်ငြာ
ဘုန်းရှိန်ခန့်ဟာ မှော်ဝင်နေတယ့် သရုပ်ဆောင်များလား ?
ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ အနေနဲ့ အအေးနဲ့ချောကလက်တွေ ပေးဝေခဲ့တယ့် မအေးသောင်း
လူပြောများနေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ မရိုးရတဲ့ ပွဲတက်ဖက်ရှင် ဗီဒီယို
ချစ်သူက အရာအားလုံးလို့ခံယူထားတဲ့ကောင်လေးတွေအတွက် ထွန်းထွန်း၊ ဝေလျှံ၊ ဒီဖြိုးတို့ရဲ့ သီချင်းသစ်
မကြာခင်ထွက်ရှိလာတော့မယ့် “ဘာတွေဖြစ်” အခွေနောက်ကွယ်က အကြောင်းတွေပြောပြလာတဲ့ ဖြိုးလေး
ကြော်ငြာအတွက် အကလေ့ကျင့်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် နေတိုးနဲ့ဖွေးဖွေး
ရုပ်ရှင်တန်းဝင်မဟုတ်တာကြောင့် အကယ်ဒမီစကာတင် စာရင်းထဲမပါတာဆိုတဲ့ ဇေရဲထက်
နွံနစ်တဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းကို အပြိုင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ ဒေါင်း နဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
ချစ်သူကိုပြောချင်တာတွေအတွက် ရေဒီယိုမှာသီချင်းတောင်းလိုက်တဲ့ အေးမြတ်သူ
Line Walker2ဇာတ်ကားရဲ့ ရိုက်ကူးရေးကိုသွားကြည့်ပြီး မြန်မာတွေရဲ့အားနည်းချက်တစ်ချို့ကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ထားထက်ထက်
ဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့ရိုက်ချက်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေအံ့အားသင့်သွားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့ ဟိန်းမင်းသူတို့ရဲ့ စုံတွဲသီချင်းအသစ်
ယောဂီတွေနေဖို့အတွက် အဆောင်သစ်ကို ရေစက်ချလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော
နှလုံးအောင့်ရောဂါကြောင့် အရေးပေါ်ကုသမှုခံယူနေရတဲ့ ဟာသလူရွှင်တော်သရုပ်ဆောင် ဒိန်းဒေါင်
တေးရေးဆရာ ဝေကြီးရဲ့ လွတ်လပ်ရေးပေးခြင်းကို ခံလိုက်ရတဲ့ တေးသံရှင် ဝိုင်းလေး
အသက်(၄၀)ပြည့်တဲ့နေ့မှာပရိသတ်တွေကို သီချင်းသစ်လေးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ မင်းမော်ကွန်း
အောင်ပွဲရ ရှေ့တန်းပြန်တပ်မတော်သားတွေကို ကြိုဆိုခဲ့တဲ့ ဂျူးဂျူးသစ္စာ
Line Walker2ရိုက်ကူးရေးကို နေ့တိုင်းသွားကြည့်တာ ပညာတွေတိုးသလို အချိန်ပေးရကျိုးနပ်တယ် ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်
ရင်းနှီးမှုတွေများစွာနဲ့ အောင်မြင်စွာရိုက်ကူးပြီးစီးသွားတဲ့ Line Walker2အက်ရှင်ဇာတ်ကား
ဓာတ်ပြားခေတ်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားစေလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချီးကျူးခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ ဓာတ်ပြားအဆိုတော်မလေး နီနီခင်ဇော်
ဂျူနီယာမြင့်မြတ်လေးကို သတိရလို့သွားတွေ့တဲ့ အပျိုကြီးမမ ဆူဇီ
“ကို” လို့ခေါ်ခိုင်းပြီး အမျိုးသမီးထုကြီးကို သဲသဲလှုပ်ဖြစ်သွားစေတဲ့ ပုံတွေတင်လိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်
ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ သားလေး(၃)ယောက်ကို အပြီးပိုင်မွေးစားလိုက်တဲ့ ပရဟိတ မင်းသမီးလေး ခိုင်နှင်းဝေ
မိဘမဲ့ကလေးတွေကို ရှင်သာမဏေအဖြစ် ရှင်ပြုအလှူတော်မင်္ဂလာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တေးသံရှင် ရတနာမိုင် တို့မိသားစု
အိပ်မက်တစ်ခုလို ပစ်ချခဲ့တဲ့ချစ်သူအကြောင်း သီဆိုထားတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ အသစ်စက်စက် သီချင်းအသစ်
မိချော လောက်မမြူးလို့ဆိုပြီး ဝေဖန်မှုတချို့ရှိနေတဲ့ မနောရဲ့ သြင်္ကန်မယ်လှသူဇာ
ဓားထိုးဒဏ်ရာနဲ့အတူ ဘဝတစ်ပါးသို့ကူးပြောင်းသွားတဲ့ တေးရေးဆရာ ကမ္ဘာ
နယ်ပရိသတ်တွေက အနုပညာရှင်တွေကို စိတ်ရောကိုပါအားပေးကြောင်း သက်သေပြလိုက်တဲ့ “မဲလမရွာ” တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲ
ကျောင်းသူလေးရဲ့ တောင်းဆိုချက်အတိုင်း ချက်ချင်းပွေ့ချီခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်နဲ့သရုပ်ဆောင် တိုင်ရွန်
ချစ်တဲ့သူတွေကို နောက်ထပ်မချစ်ဘဲမနေနိုင်အောင် အသည်းတွေ ခြွေလိုက်ပြန်တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
မှင်သက်လောက်တဲ့ အမိုက်စားရိုက်ချက်တွေနဲ့ တေးသံရှင် ဖြိုးလေးရဲ့ MTV
ရန်ကုန်စည်ပင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခြယ်ခံမယ့် အလှမယ်ထက်ထက်ထွန်း
အမျိုးသမီးတွေ ရာသီသွေးလာခြင်းဟာ အမျိုးသားတွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် အေးမြတ်သူ
ပရိသတ်တွေစောင့်မျှော်နေတဲ့ နေတိုးရဲ့ တာတူးဇာတ်ရုပ်
အဖွားရဲ့ရက်လည်ဆွမ်းကျွေးအတွက် မွေးရပ်မြေ “မြိတ်” မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ ပိုင်တံခွန်
(၂) ပတ်ကျော် အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီးမှ ပြန်ပေါ်လာတဲ့ ရေခဲတောင်အဖွဲ့သားများ
တန်ခူးရဲ့အငွေ့အသက်တွေ အပြည့်အဝပေးစွမ်းတော့မယ့် တေးသံရှင် ပိုပို
ပုရိသယောင်္ကျားတွေကတော့ ရင်တွေခုန်နေတော့မှာပဲ မတ်မတ်သဉ္ဇာရေ
တင်ဇာမော် တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ထူးခြားတဲ့သီချင်းသည်လေးတွေ
ရိုစီဇာတ်ရုပ်ကို အပီအပြင်သရုပ်ဆောင်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ကျော်ကျော်
သားလေးအတွက် ကြက်ဥကာကျက် မရ ရ အောင် ရှာပေးခဲ့တယ့် ရွှေမြန်မာနှစ်ယောက်ကို ကျေးဇူးတင်လိုက်တယ့် မယ်လိုဒီ
ချစ်ခြင်းတွေ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကြမယ့် ဟိန်းဝေယံ နဲ့ ရတနာမိုင်
မေမြင့်မိုရ်ကြောင့် စတော်ဘယ်ရီသီး ဖြစ်ချင်သွားကြတဲ့ ယောကျာ်းထုကြီး
မွေးနေ့မှာ အလှူအတန်းတွေများစွာ ပြုလုပ်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေ
ချစ်သူကို မျှော်နေရတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် Myanmar Idol အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ “မျှော်”
ကံမပါရင် ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစား အကယ်ဒမီ ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အောင်ရဲလင်း
ချစ်ရတဲ့ မင်းသမီးတစ်ဦးက အကယ်ဒမီမှန်းပေးလို့ ပျော်တယ်ဆိုတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း
သြင်္ကန်သီချင်းအသစ်လေးနဲ့ ပွဲဦးထွက်လာတဲ့ ကျော်ထက်အောင်
ပရိသတ်တွေအထင်မှားအောင် ပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့ အကယ်ဒမီ နေတိုး
ပရိသတ်က တကယ်သိချင်တာထက် မီဒီယာတွေကပဲ မေးစရာမေးခွန်း မရှိတော့တာလားဆိုတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း
အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ အသည်းတွေကို ကိုင်လှုပ်နေတဲ့ လုလုအောင်
အိစိကွေးအကြောင်း ထည့်မေးထားတဲ့ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ စာမေးပွဲမေးခွန်း
အကယ်ဒမီပေးပွဲနီးမှ တိုက်ခိုက်မှုခံနေရတဲ့ မုန်းစွဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး
စုံတွဲကြော်ငြာရိုက်ကူးနေကြတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် ဒေါင်းနဲ့ မေမြင့်မိုရ်
အကယ်ဒမီပေးပွဲ တက်ရောက်ခွင့်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ကြောင်း ကြေညာလိုက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး
၂၀၁၈ခုနှစ်အတွက် အကယ်ဒမီ စုစုပေါင်း (၄) ဆု ဆွတ်ခူးရရှိသွားတဲ့ မုန်းစွဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး
အကောင်းဆုံး အမျိုးသားရုပ်ရှင်ဇာတ်ပို့ဆု ရရှိသွားတဲ့ အကယ်ဒမီကျော်ကျော်ဗိုလ်ရဲ့ ဝမ်းသာပီတိစကားသံ
အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဆောင်ဆု ရရှိသွားတဲ့ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ ဖွေးဖွေး
ပရိသတ်တွေ ရင်ဘက်နဲ့ထပ်တူမကျခဲ့တဲ့ မြန်မာ့အကယ်ဒမီ
ကွတ်ခိုင် သွားချင်အောင် ကွတ်ခိုင်ရဲ့အလှတရားတွေ ဖော်ပြလိုက်တဲ့ နင်ဇီမေ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလှဘုရင်မတစ်ပါးလို့ တင်စားရလောက်တဲ့ မိုးဟေကို
ကျော်ကျော်ဗိုလ်ရဲ့ အကယ်ဒမီ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲကို တက်ရောက်လာကြတဲ့ အနုပညာရှင်များ
မမျှော်လင့်ဘဲ စပရိုက်အတိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ အကယ်ဒမီ အေးမြတ်သူ
အားလုံးကို ဆန့်ကျင်ပြီးနေရတာ သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
(၂၈) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ တေးသံရှင် အိမ့်ချစ်
အမိုက်စား ကြွက်သားတွေနဲ့ ကြွေကျမတတ် ခြွေနေတဲ့ ပိုင်တံခွန်
ကြည့်ရှုသူ သိန်းနဲ့ချီအောင်ရှိနေတဲ့ Frenzo Artists တွေရဲ့ “ငါ့ရည်းစားကပိုမိုက်တယ်”
စမူဆာလေးကို အားရပါးရသုံးဆောင်လို့ရပြီဆိုတဲ့ တေးသံရှင် ဟဲလေး
ဝေဖန်မှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့ ဒါရိုက်တာပြည်ဟိန်းသီဟ ရိုက်ကူးထားတဲ့ “ယောက်ဖတောင်ကိုကျော်၍ ယောက္ခမပင်လယ်ကိုဖြတ်မည်” ဇာတ်ကား
ပရိသတ်တွေရဲ့ဆေးထိုးကြမ်းမှုကြောင့် မိန်းကလေးဘဝရောက်သွားတဲ့ အိစိကွေး
လျှပ်တပြက်ရိုက်ချက်တွေကြားက အပြုံးတွေနဲ့ ဖမ်းစားလိုက်တဲ့ နော်ဖောအယ်ထား
မင်းသွေးတည်ထားခဲ့တဲ့ မဟာမုနိရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးရဲ့ ဘုရားအနေကဇာတင် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲ
ရေပန်းစားနေတဲ့ သက်တန့်ကြီးကွေးသွားတဲ့ ထက်ယံရဲ့ နွေးသွားတယ် MTV ထွက်ရှိ
ဂန့်ဂေါမြို့က စေတနာကောင်းတဲ့ ဒေသခံအန်တီကြီးတွေနဲ့ အဖွဲ့ကျနေတဲ့ သက်မွန်မြင့်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနုပညာလောကမှာ နေတိုးကို အားအကျဆုံးလို့ ပြောလာတဲ့ နေရွှေသွေးအောင်
ပရိသတ်တွေ သဘောကျနေကြတဲ့ မြင့်မြတ်နဲ့ သက်မွန်မြင့်တို့ရဲ့ အခွီဗီဒီယို
မေမေ ချစ်သုေ၀ နဲ့ ကိုရီးယားရောက်နေတဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်လေးရဲ့ ပုံရိပ်များ
ဆလုံကျွန်းသူ ကျွန်းသားတွေရဲ့ အမိုက်စားစတိုင်တွေကို သဘောကျလို့ ဓာတ်ဖမ်းခွင့် ပြန်တောင်းရတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြစ်ဒဏ်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင်
ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ပင်လယ်ပျော်မင်းသမီးလေး ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
“သူဘယ်သူလဲ” မေးခွန်းထုတ်ကြမယ့် ပိုင်တံခွန်၊ ချမ်းမင်းရဲထွဋ်၊ နေလင်းရှိန် နဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
ကြည့်ရှုသူ သန်းနဲ့ချီသွားတဲ့ G Fatt ရေးပေးတဲ့ နန်းဆုရတီစိုးရဲ့ သီချင်းအသစ်
ရင်ခွင်တံခါးကိုခေါက်၍ နှလုံးသားပေါ် ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ ဧည့်သည်က ဘယ်သူဖြစ်မလဲ
ချစ်သူမရှိတဲ့သူတွေ အားကျအောင် ချစ်ပြနေတဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေ နဲ့ နန်းသူဇာ
အချစ်ကြောင့် အရူးကမ္ဘာထဲရောက်သွားတဲ့ ရဲလေးရဲ့ သီချင်းအသစ်
(၂၈) ပြည့်မွေးနေ့ကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ နေရွှေသွေးအောင်
“ဧည့်သည်” ဇာတ်ကားနဲ့ ရွှေမှုန်ရတီကို အကယ်ဒမီပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့ ပွင့်နဒီမောင်
အမိုက်စားကြွက်သားတွေကို မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်နဲ့သရုပ်ဆောင် ထူးအောင်
ဟာသ သရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ် ဆုံးပါးသွားတဲ့ သတင်းအပေါ် ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် နဲ့ သရုပ်ဆောင် ခင်သဇင်
ကလေးတွေနဲ့ Tik Tok ဆော့ပြီး ပိုးဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ တင်ဇာမော်
ပရိသတ်တွေ ရင်ခုန်စွာစောင့်မျှော်ရဦးမယ့် အခမ်းနားဆုံးမေတ္တာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား
ခင်လေးလှရဲ့လား မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ အပျိုကြီးမမ ခင်လေးနွယ်
မှင်သက်လောက်တဲ့ အမိုက်စား ရိုက်ကူးမှုတွေ ပြုလုပ်နေကြတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ နန်းသီရိမောင်
အိမ်တစ်အိမ်လုံး သူခိုးဖောက်ထွင်းတာခံလိုက်ရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ပွင့်နဒီမောင်
မယ်သီလရှင် ထွက်ပြီးနောက် ကတုံးကေနဲ့ အရမ်းတွေဂေါ်ထွက်နေတဲ့ တေးသံရှင် ပိုပို
တေးရေး ဝေကြီး ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး ကိုယ်တိုင်သီဆိုထားတဲ့ “လိုင်းပေါ်မတင်ပါနဲ့” သီချင်းအသစ်စက်စက်
ရွှေရောင်နတ်သမီးလေးတစ်ပါးလို လှလွန်းနေတဲ့ မိုးဟေကို
ပင်လယ်ထဲက အမိုက်စား Tow-Piece ပုံတွေတက်လာတဲ့ အိချောပို
ပရိသတ်တွေကို အချစ်ပိုစေခဲ့တဲ့ “စိုး” ညီမတွေရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာညချမ်း ပုံရိပ်များ
လူငယ်တွေရဲ့ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးတော့မယ့် Myanmar Idol Season (4)
ကိုရီးယားမလေးတွေ ထိုင်ငိုသွားလောက်ရအောင် ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အချစ်ရဲ့အဓိပါ္ပယ်တွေ ဖွင့်ဆိုလိုက်တဲ့ ဇာဏ်ခီ
အမိုက်စား စာသားတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရှေ့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ လွှမ်းပိုင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ (၇၄) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို လူပေါင်း (၇၄၀) မှ ကဒ်ပြားများကိုင်ဆောင်ပြီး မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့ မြင်ကွင်းများ
ညီအစ်မတွေအလား အထင်မှားသွားစေတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်တို့ သားအမိနှစ်ဦး
သာသနာ့ဘောင် အတွင်းမှာ အေးချမ်းစွာ မြင်တွေ့ရတဲ့ သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို နဲ့ ယွန်းရွှေရည်
ပရိသတ်တွေကို ရယ်မောစေခဲ့တဲ့ ရဲလေး နဲ့ ဂျိုကာတို့ရဲ့ Tik Tok ဟာသများ
ကိုယ်ပိုင်စာသားတွေနဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ကျော်ရဲအောင်
အင်းယားကန်ဘောင်က ဝန်ထမ်းတွေကိုလှူဒါန်းဖို့ စေတနာပါပါ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်နေတဲ့ ဖွေးဖွေး
စုံတွဲကြော်ငြာရိုက်ကူးနေကြတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့ အလှတရားတွေ အမိုက်စားမြင်တွေ့ရတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ
နှစ်ကြိမ်မြောက်လွှင့်ဖြစ်တဲ့ Live မှာ ပရိသတ်တွေကို ပဟေဠိလုပ်လိုက်တဲ့ နေတိုး
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သတင်းတွေကို တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပေးသွားတော့မယ့် PUBG Mobile Game